China ASTM Standard Gi Iron Galvanized Steel Pipe 2inch 2.5inch 4inch orinasa sy mpanamboatra | Mandresy
Gnandrisika Steel Pipe
Ny fantson-tsolika dia zaraina ho fantsom-by vy nandrahoana mafana sy fantsom-by vita amin'ny vy nandrisika izay misy sosona mitafy eo amboniny. Ny galvanizing dia afaka mampitombo ny fanoherana ny harafesin'ny fantsom-by ary manitatra ny androm-piainan'ny fantsom-by.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny "fantsom-boaloboka mialoha" sy ny "fantsom-pantsaka nalentika mafana".
1.Pre-nandrisika vy fantsona vy fototra no nandrisika vy fehy, ny fomba teknika dia ERW longitudinal welded.
2.Ny fotony fantsom-boaloboka voafafy mafana dia fantsom-by mainty (tsy misy fitsaboana ambony), avy eo atsofoka ao anaty dobo zinc mba hahazoana ilay fantsona.
OD Nandrisika mialoha: 1/2 ”-4” (21.3-114.3mm)
Nandroboka hafanana: 1/2 "-16" (21.3mm-406.4mm)
hateviny Pre galvanized: 0.6-2.5mm
Hot nandroso nandrisika: 1.0- 20mm
Halavan'ny halavany 5.8m, 6m, 19ft, 20ft, 21ft, 24ft, na namboarina.
Famaranana farany Farany lemaka / beveled na kofehy miaraka amina faladiany / fonosana ary satroka plastika, voahidy
Malagasy BS 1387, BS1139, EN39, EN10219, ASTM A53, ASTM A795, GB / T3091etc.
Haben'ny fantsona nominal
Diameter mivoaka Hatevin'ny rindrina
A B ASME SCH10 SEK20 SEK30 STD SCH40 SCH60 XS SEK80
Fitsaboana farany amin'ny Sodina
Farany lemaka, faran'ny beveled, faran'ny kofehy miaraka amina faladiany na fonosana ary satroka plastika, tendrony mihombo, faran'ny Sweden, faran'ny nanitatra.
Ny fantson-tsavily dia be mpampiasa. Ankoatry ny fantsom-pivezivezena amin'ny fitaterana rano, ady amin'ny afo, lasantsy, lakandrano, ary ranoka misy tsindry ambany hafa, izy ireo koa dia ampiasaina ho toy ny fantsom-pamokarana ao amin'ny indostria solika, fantsona trestle, ary tionelina fitrandrahana.
Fonosana 1.General: amin'ny fonosana ihany, tsy misy fonosana hafa, tsy misy fonony plastika, tsy misy tadiny nylon.
Fonosana 2.Sea-mendrika: anaty fonosana, mifamatotra amin'ny tadiny vy, fonosana plastika manohitra ny rano, fehy nylon amin'ny faran'ny fonosana.
1.Mandefasa amin'ny kaontenera.
2.Loading'ny fandefasana betsaka.
F: Ahoana no ahafahako mahazo vidiny marina amin'ny fanontaniako?
A: Andriamatoa / Ramatoa malala, mila eto ambany amin'ny takinao izahay hanamarina ny vidiny:
2. Ny hatevin'ny rindrina
F: Karazana fonosana inona no ho azoko?
A: Hahazo fonosana amin'ny fonosana amin'ny fehy vy ianao (tsy misy fonony hafa) raha tsy manana fepetra takiana ny mpanjifa.
F: Karazana fonosana inona no anananao?
1. fonosana ankapobeny. –Ampirina anaty fehezam-boninkazo misy tadiny vy, tsy misy fonony hafa, tsy misy fonosana plastika.
2. fonosana azo zahana. - Fonosina amboara, ary fonosina fonosana plastika.
A: Eny, manana fantsona stok isika ho an'ny famaritana ankapobeny.
F: Manome santionany maimaimpoana ve ianao?
A: Eny, tsy andoavambola ny santionany.
Na dia azafady aza dia nanamarika tamin-katsaram-panahy ny vidin'ny mpandefa iraka iraisam-pirenena fa tsy maimaim-poana.
Azontsika atao ny mamerina ny vidin'ny mpandefa hafatra amin'ny mpanjifa raha vao miara-miasa izahay.
Ny santionany dia alefan'ny mpanamory fiaramanidina raha lanja latsaky ny 1kg.
Teo aloha: Tube an-tsokosoko mangatsiaka mangatsiaka mifangaro vy ho an'ny fanaka vy sy ny firafitra
Manaraka: Carbon Steel Hot Rolled Sheet Plate S235 SS400 ASTM A36